Lota Wholesales on Windows PC Download Free - 1.2 - com.wholesales.lota
Home / Shopping Apps / Lota Wholesales on Windows Pc
Lota Wholesales on Windows Pc
- ဖေ့ဘုတ်အကောင့်ဖြင့်တိုက်ရိုက်ဝင်နိုင်သည်- Lota Wholesales ဖေ့ဘုတ်ပေ့သို့ ဆော့ဝဲမှတိုက်ရိုက်စကားပြောနိုင်သည်- ဆော့ဝဲအားအသုံးပြုပြီး... [see more]
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အသားချောင်းများ၊ ထိုင်းစတိုင် ကြက်သားပြား၊ ၀က်သားပြား၊ စားသောက်ကုန်များအား မြန်မာနိုင်ငံရှိ စားသောက်ဆိုင်များ၊ အသေးစား၊ အလတ်စား... [read more]
On this page you can download Lota Wholesales and install on Windows PC. Lota Wholesales is free Shopping app, developed by Burma Tech. Latest version of Lota Wholesales is 1.2, was released on 2018-01-20 (updated on 2019-07-06). Estimated number of the downloads is more than 50. Overall rating of Lota Wholesales is 1,0. Generally most of the top apps on Android Store have rating of 4+. This app had been rated by 1 users, 1 users had rated it 5*, 1 users had rated it 1*. Older versions of Lota Wholesales are also available with us 1.2
How to install Lota Wholesales on Windows?
Instruction on how to install Lota Wholesales on Windows XP/7/8/10 Pc & Laptop
In this post, I am going to show you how to install Lota Wholesales on Windows PC by using Android App Player such as BlueStacks, Nox, KOPlayer, ...
Step By Step Guide To Install Lota Wholesales using BlueStacks
How to install Lota Wholesales on Windows PC using NoxPlayer
Download Lota Wholesales 1.2 on Windows PC – 6.1 MB
Shanti Sudha HSEBS
- Lota Wholesales ဖေ့ဘုတ်ပေ့သို့ ဆော့ဝဲမှတိုက်ရိုက်စကားပြောနိုင်သည်
- ဆော့ဝဲအားအသုံးပြုပြီး အော်ဒါပြုလုပ်နုိုင်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အသားချောင်းများ၊ ထိုင်းစတိုင် ကြက်သားပြား၊ ၀က်သားပြား၊ စားသောက်ကုန်များအား မြန်မာနိုင်ငံရှိ စားသောက်ဆိုင်များ၊ အသေးစား၊ အလတ်စား ကုန်သည်များ၊ ပြန်လည်ရောင်းချသူများအား လက်ကားရောင်းချပေးပါသည်။
ရောင်းချရာတွင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးအစရှိသည့် မြို့များ၏ ကားဂိတ်အရောက် တာဝန်ယူပို့ဆောင် ရောင်းချပေးနေပြီဖြစ်ပါသည်။